Inthanethi, Iwebhusayithi Promotion Social Media
Inthanethi Kusinika ithuba elikhulu siyozijabulisa. Thina ativete, imicabango yabo, imizwa, lekutsatfwa ngayo izenzakalo ezihlukahlukene zezwe ukuze kangangokuthi ngaphambi kokusungulwa kuwebhu emhlabeni wonke nje kwakubonakala kungenakwenzeka. Sekuyisikhathi eside kunqunywa ifomu elula futhi kunengqondo ukuba ngikhonze njengephayona inkundla yokuzibeka. Le blog, kwakheka igama okuyinto sengathi ngokwalo kusukela ibinzana "log web", kancane kancane ukuba inguqulo yesimanje ye ajwayelekile.
Nokho, njengoba sazi, inkululeko kusho abanye zokuziphatha umthwalo. Lokhu kunjalo kulokhu. Ithuba ukuhlanganyela abafundi imizwa kanye nemicabango yabo kusikisela ukuba khona kwabo. Futhi hhayi kanye, kodwa ngaso sonke isikhathi. Kungcono uzitholele zonke okuthile usuku ezintsha nezithakazelisayo e blog yakhe. Futhi uma akuzange kusungulwe? Khona-ke abafundi intando kancane kancane ngokuhlala nesithakazelo kuwe blog okungukuthi ziyawohloka. Yini engenziwa kuleli cala? Yiqiniso, okokuqala, kudingeka ukusebenza ngokwabo, baba umuntu futhi mnandi ukuthuthukisa amakghonwabo. Kodwa lena akuyona indlela kuphela.
namuhla Inthanethi iyindawo kakhulu inabantu abaningi. Uqukethe omkhulu inani Imininingwane. Kungenzeka izindaba okungukuthi imicabango oluhlelwe ngezihloko futhi obsuzhdaemy, fresh futhi baqonde izinto ezenzekayo futhi imizwa, nje into ezithakazelisayo noma iyahlekisa. Futhi lapha siyikhumbule ngalokho "kwabantu". Ake sithi endaweni ethile kwakuzwakala into bakhangwa wena. Nokho, inethiwekhi emhlabeni wonke nawo njengomnyango mkhulu kakhulu. Uma unokuthile wathola nokufunda, lokhu akusho ukuthi kwabanye abafundi uzophinde ebhekene lolu lwazi. Khona-ke, ngaphambi kokuba kunyatheliswe kuyinto blog yakhe (Yiqiniso, ebhekisela umthombo okuvela kulo sihloko esithathwayo), wena kuzosiza abafundi bakho ukuba bajwayelane material amasha kanye ezibalulekile. Lapha siyabona ukuthi ukubalwa kwabantu.
Kumele baqonde ukuthi uma wenza sihloko okuhle blog yakhe, nezinye Blogger ungase uthande ukuba kushicilelwe futhi ekhaya. Futhi lokho kulungile. Inthanethi futhi kukhona zokusakaza ulwazi. Futhi-ke, yini ukubalwa kwabantu? Lena enye yezindlela igunya ekugqugquzeleni impahla ezithakazelisayo kunethiwekhi.
Abanye bangase bacabange ukuthi isenzo esinjalo kungenzeka yini kudale umdali sihloko se-copyright. Phela, abantu babonisa amakhono abo creative, enza into futhi ukuyithanda ngaphezulu. Yiqiniso, ngezinye izikhathi ungase ucabangele isimo esinjalo, kodwa ezimweni eziningi lokhu akulona iqiniso. Ngokwesibonelo, ungase uphawule ukuthi izindaba ezenzeka emhlabeni, imicabango yabantu ngazo azihlanganisiwe kwalesi sikhwama. Kukhona izihloko, umane uveza umbono kombhali mayelana udaba oluthile, futhi ngokuvamile kuba nesithakazelo umphakathi kakhulu ukwazi imicabango yakhe. Kube yikulu ngakunye isici yini ukubalwa kwabantu. Lapho sihloko kuhle, Lokuzaliswa umthombo esho kuyasiza ukwandisa ukuthandwa umbhali, hhayi okubi ngaye.
Ngaphezu kwalokho, kuyenzeka ukuthi izihloko ashicilelwe ngokukhethekile ukuba ufunde amaningi ngangokunokwenzeka. Kulokhu, umlobi waleli umlayezo ubeka inothi "esiphezulu ukubalwa kwabantu," okhuluma isithakazelo ayenaso nokuqwashisa ezibanzi abanye abantu.
Uma sibona okuthunyelwe onentshisekelo kuwebhu emhlabeni wonke bese ucabanga indlela yokwenza ukubalwa kwabantu, kubalulekile ukuba bajwayelane yokuthi lo mbhali ubhala izinto. Uma izithiyo ukuze yokukopisha cha, uma ushicilela kumele ukhombise umthombo impahla.
Umhlahlandlela: Yini okumele uyenze uma iqandiswe ikhasi, "In Touch"?
Njengoba e "Instagrame" Ukudayela ababhalisile? Indlela ukukopela ababhalisile "Instagrame"
Sterling Nayt - ithalente abasha
Indlela ukuqeda fan ecasulayo? Indlela wenqaba ngomusa umfana
Indima Syntactic izingxenye yokukhuluma
Ukuthuthukiswa Film we ifilimu ekhaya
Thatha ekhoneni ezithambile ekhishini
Ukudoba ifindo ngoba platting: incazelo kanye isinyathelo ngesinyathelo imiyalelo. Nodes "Palomar", "Kinch" futhi abanye plaiting